Yintoni onokuyibona eSeville ngosuku olunye | Uhambo lweNdaba
UMariela Carril | 12/05/2022 17:00 | Ukuhlaziywa ukuba 12/05/2022 18:42 | Yintoni ongayibona, Sevilla
Ukuba uhamba kuhambo oluya eSpain okanye wenze ukhenketho lwangaphakathi kwaye uthathe isigqibo sokuya eSeville, kukho iindawo ezithile kunye namava athile ongenakuphoswa. Njani kwaye yintoni ukukhetha? Iiyure ze-24 azikho ixesha elide, ngokuqwalasela ukuba inxalenye iya ephupheni kwaye mhlawumbi enye kuhambo ...
Ngoko ke nalu uluhlu lwethu Yintoni onokuyibona eSeville ngosuku olunye.
1 ICawa yaseSanta Maria
2 Inkonzo yoMsindisi oNgcwele
3 ISpain Square
4 I-Alcazar yokwenyani yaseSeville
5 inqaba yegolide
6 Isikwere esitsha
7 Isithili saseTriana
8 I-Metropol parasol
9 Ibhotwe laseSan Telmo
10 Ukutya eSeville
11 Bona umboniso weflamenco
ICawa yaseSanta Maria
Luphawu lwesixeko kwaye kwangaxeshanye Yeyona tempile inkulu yeGothic eYurophu, ke ukuba uyasithanda esi sitayile soyilo awunakuphoswa. Ngaphakathi kukho i ingcwaba likaChristopher Columbus, nto leyo eyenza kube nomtsalane kutyelelo.
Eyona nto ingcono kukuthenga i Itikiti elidibeneyo lokutyelela iCathedral, iGiralda kunye neCawa yase-El Salvador, zonke ze-euro ezili-10. Kwaye ukuba wongeza 5 euro ngaphezulu uthatha isikhokelo audio. I-La Giralda yinqaba yentsimbi, eyake yaba yeyona ndawo iphakamileyo esixekweni.
Inqaba yakhiwe ngexesha lokubuyisela kwaye inguqulelo yokuqala yabandakanya i-minaret ye-mosque eyayikade imi kwindawo yetempile yamaKatolika. Unembono ezukileyo ukusuka apha, kodwa qaphela ukuba akukho zitephusi, irempu nje emtyibilizi. Iwufanele umngcipheko.
Inkonzo yoMsindisi oNgcwele
Yiyo icawa enemibala kunye nesimbo esinomdla kakhulu. Yakhiwa phakathi kwenkulungwane ye-8 neye-XNUMX. Umnyango wokuyibona ngaphakathi ubiza i-euro ezi-XNUMX.
Isikwere sesona sikwere sithandwa kakhulu kwaye Ijikelezwe ngumjelo omde apho izikhephe ezincinci zijikeleza khona. Ingaphakathi kweMaría Luisa Park, yakhiwa ngumakhi waseSpain uAníbal González Álvarez Ossorio, 1929, kwaye ifuzisela umanyano kunye namathanga aphesheya kunye noxolo.
Isikwere siqulathe ngokulandelelana iithayile ezimibalabala kuzo zonke iikona ze lizwe kwaye ivuleleka kuMlambo iGualdaquivir, indlela eya eAtlantiki kwaye ngokuchanekileyo ukuya kumathanga aseMelika. Isikwere sikwakunye ne-Avenida de Isabel la Católica kwaye ngokucacileyo, isesidlangalaleni kwaye sikhululekile ukungena.
Kwisikwere uya kubona kwakhona iinqwelo. Unokubathatha emnyango wecathedral ukuba uhambe ujikeleze isixeko. Indlela efanelekileyo kukuqala kwi-cathedral kwaye uwele iMaría Luisa Park de ufikelele kwi-Plaza de España. Luhambo oluhle kakhulu kwaye luxabisa malunga ne-36 ye-euro kubantu abadala abane.
Ngaba uyazi ukuba imiboniso emininzi ye Umdlalo weTrone?
I-Alcazar yokwenyani yaseSeville
Yimizuzu embalwa yokuhamba ukusuka ePlaza de España. Oku yi ibhotwe elidumileyo elakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX, nangona ngenkulungwane yeshumi elinesine yabuyiselwa kwisimbo semudejar. Namhlanje ezinye izakhiwo zisasetyenziswa yintsapho yasebukhosini njengendawo yabo yokuhlala esemthethweni.
Inqaba lelona bhotwe lidala laseYurophu elisetyenziswayo kwaye ukusukela ngo-1987 ibiyinxalenye ye Uluhlu lweUNESCO.
Le nqaba yayiyiyo ekuqaleni inxalenye yodonga lwesixeko eyahlula iAlcázar kuyo yonke iSeville, ngenjongo yokuba lawula indlela yokudlula kumlambo waseGuadalquivir. Ukungena kubiza i-euro ezi-3.
Ukuhamba esixekweni kwaye ukuya ngasecathedral uya kunqumla oku isikwere esibanzi nesiphangaleleyo esijikelezwe zizakhiwo ezintle. Namhlanje ezo zakhiwo zihlala, ezinye zazo, ziivenkile ezidumileyo zabayili. Asiyondawo egcwele abakhenkethi ke ukuba ujonge iiperile ngaphandle kokhenketho lwabantu, le yenye yazo.
Ukuhamba esinye sezona zithili zibukekayo kwaye zinemibala yaseSeville ifanelekile. Ikwelinye icala lomlambo kwaye kufuneka uwele ibhulorho. Ngaphambili kubonakala ngathi abo batyholwa ngobugqwirha bangcwatywa...
Esi sakhiwo sale mihla sayilwa ngumakhi uJurgen Mayer kwaye ngandlel 'ithile sahlaziya indawo esele ilityelwe. Ezi iiambrela zokhuni ezinomsebenzi othile worhwebo. Oko kukuthi, kukho iindawo zokutyela kunye neeterras zepanoramic ukonwabela iimbono ezilungileyo.
Ukuchukumisa kwanamhlanje kwisixeko esidala kakhulu.
Ibhotwe laseSan Telmo
Isakhiwo esihle sivela XVII kwinkulungwane, namhlanje ezandleni zoRhulumente oZimamelayo waseAndalusia. Inendlu entle ye-Baroque-style chapel, enokufikelelwa kwenye yeepatios zayo, ephethe utyikityo lomyili wezakhiwo uLeonardo de Figueroa.
Sesinye sezona zakhiwo zindala kwisixeko kwisitayile saseMudejar.
Akukhona nje ukwenza utyelelo lwabakhenkethi kodwa malunga amava aphilayo, ke, e Seville kufuneka ukonwabele gastronomy yendawo kwaye yindawo entle Duenas Bar. Yibhari encinci epheka izitya zasekhaya kwaye ivula ngo-8 am. Ungatya apho okanye uthenge ukutya kwaye uqhubeke uhamba.
Ibha Iphambi kwePalacio de las Duenas, eyakhiwa ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX. ikhaya leeNkosana zaseAlba kude kube ngenkulungwane ye-XNUMX kunye nengqokelela yobugcisa obunomtsalane. Ungayindwendwela. phonononga ingaphakathi layo kunye neegadi zayo… Ewe, ibha ivula ngo-8 kodwa ibhotwe livula ngo-10 kuphela.
Enye indawo ekucetyiswa ukuba utye kuyo Indawo yaseSanta Cruz, ikhenketha kakhulu kodwa akukho nto ilungileyo kuloo nto. Isusela kwinkulungwane ye-XNUMX, ubukhulu becala, nangona ii-vestiges ezindala zinokubonwa kwiindlela zayo ezimxinwa kunye neendledlana. Kwizikwere zabo apho inani leendawo zokutyela, imivalo kunye neekhefi.
Enye indawo ingaba Bar Gonzalo, malunga neCathedral yaseSeville. Sisakhiwo esimthubi, amaxabiso awabizi kakhulu kodwa izitya zinencasa ngokwenene. Ungatya isidlo sasemini nge-euro ezingama-22 i-paella kunye nenkukhu yabantu ababini.
Bona umboniso weflamenco
I-Flamenco kunye neSeville ziyafana ngoko ukonwabela umboniso olungileyo kufuneka kube kuluhlu lwethu. Kukho imiboniso emininzi kodwa kwiCalle Águilas yeyona Imyuziyam yaseFlamenco, indawo elungileyo yokufunda ngalomdaniso kwaye ubone umboniso ngqo.
Ukuba uchitha ubusuku esixekweni, okona kulungileyo kukuphuma uye kutya kwenye yezi ndawo zokutyela ezinemiboniso yeflamenco, kungenjalo kuhlala kukho imyuziyam.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Spain izixeko » Sevilla » Yintoni onokuyibona eSeville ngosuku olunye